Soo dejisan Screencast-O-Matic 2 – Vessoft
Qeybta: Diiwaanka shaashada
Bogga rasmiga ah: Screencast-O-Matic
Screencast-O-Matic – waa software si uu u qoro cajaladaha fiidiyoowga laga soo qaato shaashadda kombiyuutarka. Barnaamijku wuxuu qori karaa ficillada ka dhacaya shaashadda isla mar ahaantaana xiriiriyaha kamaradoonka iyo makarafoonka si ay uga faalloodaan diiwaanka. Screencast-O-Matic wuxuu kuu ogolaanayaa inaad diiwaangeliso dhammaan shaashadda, meesha gaarka ah iyo daaqada firfircoon. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad badbaadiso fiidiyowga la abuuray oo ku saabsan dukumintiga adag ee MP4, FLV ama AVI formatyada, fiidiyowyada boostada ee YouTube ama u gudbin martigelin lacag la’aan ah. Screencast-O-Matic waxay taageertaa garyaqaanada, waxay ku dhigi karaan daboolka rikoodhka la dhammeeyey, waxay u ogolaanayaan inay ku daraan faallooyinka iyo dhamaan qodobada muhiimka ah.
Qor falalka shaashadda oo dhan ama meel gaar ah
Diiwaangeli ka socda websaydhka
Qari calaamadda jiirka
Ku soo gudbi martigelinta iyo boostada ugu dir YouTube
Soo dejisan Screencast-O-Matic
Faallo ku saabsan Screencast-O-Matic
Screencast-O-Matic Xirfadaha la xiriira